Fanonganana ny Praiminisitra Ntsay Sonia miisa 71 no efa voaangona
Naina Andriantsitohaina “Mila olom-baovao ny firenena…”
Araka ny voalazan’ny Filohan’ny Repoblika, dia hapetraka ny komity « Loharano » eny anivon’ny Fokontany sy ny « secteurs ».
Antoko Natiora “Nijoro ho Raiamandreny ny filoha Ravalomanana.”
Ireny fijoroan’ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, ireny no atao hoe fijoroana Raiamandreny, hoy ny filohan’ny antoko politika Natiora, Mihari-Ni-Rencho, raha naneho ny heviny mikasika ny fivahinianan’ity filoham-pirenena teo aloha tamina fahitalavitra tsy miankina iray.
Mbola Rajaonah Natoka-monina tanteraka …
Re fa novaina ny toerana izay ipetrahan’i Mbola Rajaonah ao amin’ny fonjan’i Tsiafahy.
Marc Ravalomanana “Ho very eto isika raha tsy mifanampy”
Miady amin’ny zavatra tsy fantatra sy tsy nampoizina, izay mila fahakingana. Tsy sanatriavin’ny vava mitady toerana sy mitady fahefana aho, fa te hanampy, te hizara traikefa, hoy i Marc Ravalomanana omaly tamina fandaharana manokana.
Mitohy ny fihibohana ! Mikatona ny sekoly, tsy misy fitateram-bahoaka…
Tohizana ny ezaka efa natomboka, hoy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny kabariny halina ;
Fakan-kevitra Voahilika ireo hery politika sy fiarahamonim-pirenena
Ny sabotsy lasa teo no nandray ireo filoham-piangonana eo anivon` ny FFKM, sy ireo filohanà andrim-panjakana,
Arphine Rahelisoa Tsy mbola fantatra ny daty hitsarana azy
Fanalam-baraka, manosika ny olona tsy hitia ny filoham-pirenena no ambara fa vesatra hanenjehana an-dRahelisoa,
Taorian’ny toe-javatra nitranga teto amin’ny firenena tamin’ireny fanovana governemanta farany teo ireny dia fantatra izao, araka ny vaovao marim-pototra voaray,
fa mikononkonona fametraha fitsipaham-pitokisana hanesorana amin’ny toerany ny Praiminisitra Ntsay Christian ry zareo eny anivon’ny Antenimieram-pirenena eny ka arak’io vaovao voaray io dia efa nahangona sonia miisa 71 ilaina amin’izany ireo depioten’i Madagasikara ankehitriny. Raha io isa io no raisina dia azo antoka fa misy ampahana solombavambahoaka avy amin’ny IRD maromaro tafiditra ao amin’ity fanaovan-tsonia ity. Raha halefa lavidavitra kely ny famakafana dia mety ho azo antoka ny fahazoana ny fetr’isa 2/3 ilaina amin’izany fitsipaham-pikisana ataon’ireo depiote izany amin’ny volana mey 2020,fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona ity, ary hahazoana hanaovana fankatoavana na tsia an’izany fitsipaham-pitokisana izany. Marihana fa ankoatra an’ireo depiote miisa 83 mpikambana ao amin’ny vondrona parlemantera IRD ankehitriny izay mety ho mbola maro ireo hanampy ny isa dia mbola misy koa an’ireo depiote ao amin’ny vondrona parlemantera GPR “Groupe des Parlementaires Républicains” miisa 21 sy vondrona parlemantera TIM miisa 16 izay tsy azo atao tsinontsinona mihitsy. Arahan’ny maro akaiky tokoa ity toe-draharaha ity arak’izany.